Maraykanka oo la ogaaday in si hoose uu uga qaybqaadanayo dagaalka Ukrain – GOBOLADA.COM
May 8, 2022 May 8, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Maraykanka oo la ogaaday in si hoose uu uga qaybqaadanayo dagaalka Ukrain
Warbaahinta Mareykanka ayaa tibaaxday in Mareykanka uu bixiyay xogta sirta ah ee Ukraine ka caawisay in uu dego markabka Moskva, oo ah markabkii ugu weynaa ee Gantaalada Ruushka ee mara Badda Madow.
Masuuliyiin magacyadooda la qariyay ayaa sheegay in Ukraine ay weydiisay Mareykanka macluumaad ku saabsan markabka oo ka soo shiraacday koonfurta Odessa.
Mareykanka ayaa sheegay in markabka la yiraahdo Moskva ayna gacan ka geysteen xaqiijinta halka uu ku sugan yahay ka dibna Ukraine ay sidaasi laba gantaal ugu dhufutay.
Pentagon-ka Mareykanka ayaan ka hadlin wararkan ay baahiyeen warbaahinta. Balse afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in Maraykanku uu markasta siiyo xog sirdoon oo ka caawinaysa Ukraine inay is difaacdo.
Warbaahinta oo soo xiganeysa saraakiil Mareykan ah oo aan la magacaabin ayaa sheegay in aysan markaasi ogeyn in Ukraine ay beegsan doonto Moskva ka dib markii ay gacan ka geysteen sidii ay u heli lahaayeen macluumaadkiisa.
Markabkan ayaa hogaaminayay weerarkii ciidamada badda ee Ruushka ay ku qaadeen dalka Ukraine, waxaana degitaankiisu ahaa mid uur ku taallo iyo dharbaaxo militeri ah oo weyn ku noqotay Ruuska.
Dhinaca kale, afhayeenka Pentagon-ka John Kirby ayaa beeniyey warar hore oo warbaahintu ay qoreen oo ahaa in Maraykanku uu bixiyey xog ku saabsan goobaha ay ku sugan yihiin jeneraalada sare ee Ruushka ay ka joogaan goobaha dagaalka, si ciidamada Ukraine ay meesha uga saaraan.
Gudoomiyaha Golaha shacabka oo la kulmay Safiirka Sacuudiga u qaabilsan Soomaaliya
Maxay ka wada hadleen Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka & Wakiilka Dawlada Norway ee Soomaaliya ?
Ciidamada ATmis oo Hawgal ku soo qabtay Dad shacab ah
May 22, 2022 May 22, 2022 Abdukadir
Mas’uul ka Tirsan Maamulka Puntland oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo